ASAN-JIOLAHY : Lehilahy iray notapahin’ny dahalo loha tany Ankazoabo atsimo
Miaina ao anatin’ny tsy fandriam-pahalemana sy tebiteby ireo mponina ao amin’ny Distrikan’Ankazoabo atsimo, ka velon-taraina tanteraka ireo mponina manoloana ny zava-misy ankehitriny. 11 août 2017
Tovolahy iray indray no maty novonoin’ireo dahalo tamin’ny fomba feno habibiana. Afak’omaly alina no nahitana ity tranga ity raha ny tatitra voaray, ka ny razana irery ihany sisa no hitan’ireo manodidina. Tsy vitan’ireo omby amin’izao fotoana izao no angalarin’ireo malaso fa lasa maningotra aina mihitsy izy ireo.
Andrenesana halatr’omby sy vono olona ity faritra ity nanomboka hatramin’ny taona vaovao. Manao antso avo amin’ny mpitondra fanjakana izy ireo araka izany mba hijery ifotony ny zavatra nitranga. Misokatra aloha hatreto ny fanadihadiana izay nahavanona ity vono olona nahatsiravina ity. Miezaka hatrany koa ireo mpitandro filaminana mitady hevitra hanafoanana ny asan-dahalo saingy mbola tsy ahitam-bokany izany , hoy ireo mponina, fa vao mainka aza mitombo tsy misy fiafarany ny fanafihana. Miandry ny fandraisan’andraikitry ny mpitondra fanjakana hatrany ireo mponina hatreto.
Sefom-pokontany maty nokapaina vozona tao Analalava
Nokapain’ireo jiolahy tamin’ny antsibe ny lohan’ny Sefom-pokontany tao Ampanihy ka maty tsy tra-drano, ny talata alina teo tokony tamin’ny 9 ora sy sasany teo. Tao amin’ny Fokontany Ampanihy Kaominina ambanivohitry ny Distrikan’Analalava no nitrangan’ny loza.
Andian-jiolahy nirongo fitaovam-piadiana sy antsy be no nanafika ny tokantranon’ity Sefom-pokantany iray ity, izy mivady irery ihany no tao an-trano tamin’io fotoana io, araka ny loharanom-baovao. Mbola tsy natory izy mivady ireo tamin’izany ka avy hatrany novakian’ireo olon-dratsy ny vavahady.
Nambanan’ireo jiolahy antsy tamin’ny vozony ilay lehilahy sady notapahin’izy ireo ny vozony ka maty tsy tra-drano.
Ny vadiny kosa notapahin’ireo dahalo ny tanany, vita izany rehetra izany dia nakorontan’ireo jiolahy ambony ambany ny trano saingy tsy nahita zavatra sarobidy tao ireto farany. Voalaza fa ny finday iray miampy ny karapanondron’izy mivady no noentin’izy ireo nitsoaka. Efa lasa ireo dahalo vao niantso vonjy ilay ramatoa, ka vory avy hatrany ny mponina tao an-toerana namonjy azy io, ny sasany kosa nampandre ny mpitandro filaminana.
Tonga dia noentin’ireo fokonolona namonjy toeram-pitsaboana ilay niharan-doza satria noahiana ny vatany noho ny fahaverezan-drà be loatra. Efa mandeha amin’izao ny fikarohana ireo nahavanon-doza ary ny borigadin’ny Zandary ao Analalava no misahana izany ankehitriny.
Tatianà R. sy Pounie